Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2020 |
2020-04-05 @ 17:35 in Ankapobeny
Lohahevitra iray mampiady hevitra indray ny nampigadra mpanora-gazety iray eto Madagasikara tamin'ny faran'ity herinandro ity. Io ny sary hitantsika anton'ny fiampangana dia anjaran'ny tsirairay ny mieritreritra avy eo:
Izao no tsikaritra ary maha-hafa ny sary-sy-soratra (memes hoy ny teny vahiny iraisampirenena). Ambonin'ny "meme" ny lohateny amin'ilay gazety ahitana soratra hoe "confinement" izay baikon'ny fitondram-panjakana. Ambanin'ilay "meme" kosa ireo sary maro dia maro amorian'ny ao amin'ny fitondram-panjakana olona ao anatin'ny "confinement" sy ny tsy fahazoana mivorivory.
Nahoana ianao no mamory olona lazaina ho mizara sakafo sy fanampiana ny olona? Ary nahoana no tsy ahitana mpitandro ny filaminana mampanaja farafaharatsiny ny elanelana amin'ireo vory vahoaka ireo? Tsy misy arombava ireo! Toa kendrena noho izany ny hamindrana haingana dia haingana ny aretina? Tsy natsahatra ilay fizarana sakafo "spectacle" (na andeha atao hoe tsy azo alaina sary ho porofo) raha tsy notenenina hoe zarina hivory eo amin'ny kianjan'ny 13 mey ve izany olona izany?
Ka inona no ilazàna ny olona manao izay hiparitahan'ny aretina amin'ny alalan'ny Vonjy Aina tarihan'ny Ben'ny Tanànan'Antananarivo sy ireo Tsenamora any anaty tanàna sy fokontany isankarazany, tsy manaja elanelana any?
Fa moa tsy mahatohina tokoa raha ilay lohateny fotsiny no jerena fa ahoana kosa ny fandehany raha miaraka amin'ny sary eo ambaniny araham-panazavana?